थोरै र धेरै मतान्तरले पराजित हुनेहरू- समाचार - कान्तिपुर समाचार
मंसिर २५, २०७४ देवनारायण साह
मोरङ — प्रदेश १ को उदयपुर क्षेत्र १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा एमाले उम्मेदवार मञ्जुकुमारी चौधरी सबैभन्दा कम मतान्तरले पराजित भएकी छन् । चौधरी ५ सय ८४ मतान्तरले पराजित भएकी हुन् ।
उनलाई कांग्रेसका नारायण खडकाले ३३ हजार १ सय ४२ मत ल्याएर पराजित गरे । प्रदेश १ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा सबभन्दा बढी मतान्तरले झापा ५ मा कांग्रेसका खगेन्द्र अधिकारी पराजित भए । उनी २८ हजार ८ सय ४२ मतान्तरले पराजित भएका हुन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ५७ हजार १ सय ३९ मत ल्याएर उनलाई पराजित गरे ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यमा कोइरालाको बिरासत र कांग्रेसको प्रभाव क्षेत्र रहेको मोरङ ६ मा शेखर कोइराला ६ सय ७५ मतान्तरले पराजित भए । उनलाई एमालेका लालबाबु पण्डितले ३३ हजार ९ सय ४१ मत ल्याएर पराजित गरेका हुन् ।
यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्यको १ सिट रहेको संखुवासभामा कांग्रेसका दीपक खडका १ हजार ६६ मतान्तरले पराजित भए । उनलाई एमालेका राजेन्द्रप्रसाद गौतमले ३० हजार ६ सय ७१ मत ल्याएर पराजित गरे । तेह्रथुममा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा कांग्रेसका सीता गुरुङ २ हजार २१ मतले पराजित भइन् । उनलाई एमालेका भवानीप्रसाद खापुङले २१ हजार ३ सय ३५ मत ल्याएर पराजित गरे ।
त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्यमा झापा १ मा कांग्रेसका विश्वप्रकाश शर्मा २ हजार ८ सय ६३ मतले पराजित भए । उनलाई माओवादी केन्द्रका सुरेन्द्र कार्कीले ३६ हजार १ सय ७३ मत ल्याएर पराजित गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यमा सुनसरी १ मा संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका अशोककुमार राई २२ हजार ४ सय ५ मतान्तरले पराजित भए । एमालेका जयकुमार राई ४४ हजार ५ सय २८ मत ल्याएर उनलाई पराजित गरे ।
यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्यमा झापा ४ मा कांग्रेसका देउकुमार थेवे १५ हजार ६ सय ९३ मतान्तरले पराजित भए । उनलाई एमालेका लालप्रसाद साँवाले ४३ हजार ५ सय १५ मत ल्याएर पराजित गरेका हुन् । खोटाङमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा कांग्रेसका सरस्वती बजिमय १४ हजार ३ सय ७२ मतान्तरले पराजित भइन् । उनलाई पराजित गर्ने एमालेका विशाल भट्टराईले ३७ हजार ८ सय ३७ मत ल्याए ।
प्रदेश १ मा सबभन्दा बढी मत ल्याएर पराजित हुनेमा मोरङ ३ मा कांग्रेसका सुनीलकुमार शर्मा हुन् । ४० हजार ५ सय ६ मत ल्याए पनि उनी पराजित भए । उनलाई पराजित गर्ने एमालेका भानुभक्त ढकालले ४२ हजार ४ सय १३ मत पाए ।
प्रदेशसभा सदस्यमा संखुवासभा १ (ख) मा कांग्रेसका दीपककुमार लिम्बू ४ सय ४६ मतान्तरले पराजित भए । उनलाई पराजित गर्ने एमालेका तुलसीप्रसाद न्यौपानेले १३ हजार ५ सय ७२ मत ल्याए । मोरङ ३ (क) मा माओवादी केन्द्रका गीता तिम्सिना ९ सय मतान्तरले पराजित भइन् । उनलाई पराजित गर्ने कांग्रेसका सूयर्माराज राईले २० हजार २ सय ९९ मत ल्याए ।
मोरङ ५ (ख) मा कांग्रेसका राजेश गुप्ता १ हजार २ सय ८३ मतान्तरले पराजित भए । उनलाई पराजित गर्ने संघीय समाजवादी फोरमका जयराम यादवले ११ हजार २ सय १ मत ल्याए । मोरङ २ (क) मा माओवादी केन्द्रका गणेशप्रसाद उप्रेती १ हजार ३ सय ११ मतान्तरले पराजित भए । उनलाई पराजित गर्ने कांग्रेसका शिवनारायण गनगाईंले १६ हजार ४ सय १८ मत ल्याए ।
प्रदेशसभा सदस्यमा सबभन्दा बढी मतान्तरले झापा ५ (ख) मा कांग्रेसका राजनबहादुर ढुंगाना पराजित भएको छ । उनी १९ हजार ९ सय ८० मतान्तरले पराजित भए । उनलाई पराजित गर्ने एमालेका अर्जुन राईले ३० हजार ९ सय ७३ मत ल्याए । भोजपुरको १ (ख) मा कांग्रेसका गोविन्दबहादुर कार्की १३ हजार २ सय २९ मतान्तरले पराजित भए । उनलाई पराजित गर्ने एमालेका शेरधन राईले २० हजार ३ सय ३४ मत ल्याए ।
धनकुटा १ (ख) मा संघीय समाजवादी फोरमका अर्जुन थापा १२ हजार ४ सय २१ मतले पराजित भए । उनलाई पराजित गर्ने एमालेका इन्द्रमणि पराजुलीले २० हजार ६ सय ५२ मत ल्याए । प्रदेश १ मा प्रदेशसभा सदस्यमा पराजित हुनेमा सबभन्दा बढी मत ल्याएर मोरङको क्षेत्र ६ (क) मा जीवन आचार्य २१ हजार ४ सय ७० मत ल्याएर पनि पराजित रहे । उनलाई कांग्रेसका चुमनारायण तबदारले २३ हजार ५ सय १३ मत ल्याएर पराजित गरे ।
प्रदेश १ मा रहेको प्रतिनिधिसभाका २८ मध्ये २७ सिटको र प्रदेशसभा सदस्यको ५६ मध्ये ५५ को अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ । प्रदेश १ को प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ एमाले १६, माओवादी केन्द्र ६, कांग्रेस ४ र राप्रपा १ सिटमा विजय भएका छन् । यस्तै, प्रदेश १ को प्रदेशसभा सदस्यको ५६ मध्ये एमाले ३६, माओवादी केन्द्र १०, कांग्रेस ७, संघीय समाजवादी फोरम र स्वतन्त्रले १/१ सिट जितेका छन् ।
प्रतिनिधिसभातर्फ सुनसरी ३ र प्रदेशसभातर्फ सुनसरीको ३ (ख) को अन्तिम परिणाम आउन बाँकी छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यमा एमालेका भगवती चौधरी २९ हजार ३ सय २६ मत ल्याएर अग्रस्थानमा छिन् भने कांग्रेसका विजयकुमार गच्छदारले २९ हजार १ सय ७१ म्त ल्याएर पछ्याइरहेका छन् ।
प्रकाशित : मंसिर २५, २०७४ २०:००
बिना दोब्बर मतले विजयी
मंसिर २५, २०७४ भवानी भट्ट
कञ्चनपुर — विजय घोषणाको प्रमाणपत्र बुझेपछि उनी केही बोल्न खोज्दै थिइन् । तर दुई/चार शब्द नबोल्दै उनको आँखाबाट आँसु झर्न थाल्यो । ‘आज जितेर पनि खुसी हुन सक्ने अवस्था छैन,’ सोमबार कञ्चनपुर प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं. १ को निर्वाचन परिणाम घोषणापछि निर्वाचित बिना मगरले रुँदै भनिन्, ‘यस्तो खुसीको क्षणमा पनि मेरो जीवनसाथी मसँग नहुँदा दु:खी छु ।’
चुनावी प्रचारप्रसारकै क्रममा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका बेला मंसिर दोस्रो साता उनका श्रीमान् प्रकाशको हृदयाघातका कारण मृत्यु भएको थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका एक मात्र छोरा प्रकाशको आकस्मिक मृत्युपश्चात् उनले राम्ररी प्रचार–प्रसार पनि गर्न सकेकी थिइनन् । मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा दुई/तीन दिनअघि मात्रै उनी काठमाडौंबाट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र फर्केकी हुन् ।
‘यो जितमा खुसी भएर पनि प्रकाश नहुँदा हाँस्न सकिरहेकी छैन,’ उनले भनिन् । उनीसँगै प्रचारमा जुटेका र चुनाव जितेका वाम गठबन्धनका नेता कार्याकर्ता अबिर लगाएर रंगीचंगी भएका थिए । तर उनका लागि भने यो जित रंगविहीन हुन पुग्यो । सेतो सल ओढेर मतपरिणाम घोषणा सभामा उपस्थित भएकी बिनाले टीका तथा अबिर केही लगाइनन् ।
आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका उम्मेदवारभन्दा दोब्बरबढी मत ल्याएर बिनाले चुनाव जितेकी हुन् । उनले ३८ हजार ४ सय ६७ मत ल्याइन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका दिवानसिंह विष्टले १९ हजार २ सय १९ मत ल्याए । ०७० को संविधान सभा निर्वाचनमा उनी विष्टसँग झिनो मतले पराजित भएकी थिइन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर प्रतिनिधिसभामा पुग्ने उनी प्रदेश ७ कै पहिलो महिला हुन् । ‘कञ्चनपुरकी चेली पहिलो पटक निर्वाचित भएर प्रतिनिधिसभामा पुगेकी छ,’ उनले भनिन्, ‘मलाई जिताउने मतदाताको सम्मानसँगै यस क्षेत्रको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि काम गर्नेछु ।’ उनले पति वियोगका कारण आफू जिल्लामा नभएका बेला समेत प्रचारमा जुट्ने गठबन्धनका नेता, कार्यकर्ता र मतदातालाई निराश हुने गरी कुनै काम नगर्ने बताइन् ।
२०५० देखि काठमाडौंमा पढदादेखि नै उनी राजनीतिमा लागेकी हुन् । २०५३ मा आरआर क्याम्पसमा उनी स्ववियु सभापतिसमेत भइन् । सशस्त्र द्वन्द्व चर्किंदै गएपछि सुरक्षाकर्मीले उनलाई २०५८ मा गिरफ्तार गरी २७ महिना भैरवनाथ गणमा राखेको थियो । प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं. १ को प्रदेशका दुवै क्षेत्रमा वाम गठबन्धनकै उम्मेदवार विजयी भएका छन् । प्रदेश ‘क’ बाट एमालेका जिल्ला अध्यक्षसमेत रहेका तारा लामा तामाङ र ‘ख’ बाट पनि एमालेकै कुलवीर चौधरी विजयी भएका छन् ।
क्षेत्र नं. २ मा पनि वाम गठबन्धन विजयी
यसैगरी प्रतिनिधिसभाको क्षेत्र नं. २ का सबै निर्वाचन क्षेत्रमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । प्रतिनिधिसभामा एमालेका नरबहादुर धामी ३३ हजार २ सय २० मत ल्याएर विजयी भएका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका एनपी साउदले २४ हजार ८ सय ९३ मत ल्याए ।
प्रतिनिधिसभाको प्रदेश ‘क’ मा माओवादी केन्द्रका महेशदत्त जोशी १७ हजार ६ सय ७२ मत ल्याएर विजयी भएका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका पुष्करराज ओझाले १२ हजार ४ सय ३२ मत ल्याए । प्रदेश ‘ख’ मा एमालेका लालबहादुर खडका १६ हजार ३ सय ८५ मत ल्याएर विजयी भए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी बहादुर सिंह थापाले ११ हजार ८ सय ५१ मत ल्याए ।
प्रकाशित : मंसिर २५, २०७४ १९:३७